Warbixin: Wax Kasta Oo Aad Uga Baahantahay Qaab Ciyaareedka Karim Benzema Ee Kulamada El Clásico – Kooxda.com
Home 2017 April Spain, Wararka Maanta, Warbixino Warbixin: Wax Kasta Oo Aad Uga Baahantahay Qaab Ciyaareedka Karim Benzema Ee Kulamada El Clásico
Warbixin: Wax Kasta Oo Aad Uga Baahantahay Qaab Ciyaareedka Karim Benzema Ee Kulamada El Clásico
Waxa marar badan dhaleecayn loo soo jeediyaa weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Karim Benzema isaga oo lagu eedeeyo in lumiyo fursado isaga oo sidoo kale lagu eedeeyo in aanu qaab ciyaareed fiican soo bandhigin kulamada kooxaha waaweyn kooxdiisu la ciyaarayso.
Laakiin hadii aynu dib u eegno qaab ciyaareedkii weeraryahanka reer France kulamada El Clásico waxa aynu arkaynaa in ay dadku khaldan yihiin.
Tababare Zidane ayaa Benzema ku soo bilaabi doona weerarka kooxdiisa kulanka Clásico-da xilli ay sidoo kale saan-saanta ayaa sheegaysa in Benz ku soo bilaaban doono weerarka kooxdiisa isaga oo Morata kursiga kaydka galin doona sida caadada ah inta badan maadama Benzema qaab ciyaareed fiican soo bandhigo kulamada ay la ciyaarayso kooxdiisu Kooxda Barcelona.
Benzema ayaa kooxda Barcelona ka hor yimid 26 kulan tartamada oo dhan tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Real Madrid, waxa uu ka dhaliyay 8 gool halka uu sidoo kale caawiye ka ahaa 6 gool oo kale taas oo la macno ah in uu ku lug lahaa 14 gool oo ay kooxdiisu ka dhalisay Kooxda Barcelona iyada oo cel-celis ahaan ah 0.5 kulan kasta taas oo ah mid aad u saraysa in kasta oo uu kulanu mid adag yahay.
Hadii aynu eegno wax qabadaka Xiddigaha labada kooxood ugu muhiimsan ee Ronaldo iyo Messi uma dhigmaan wax qabadka Benzema maadama uu marka uu Barca ka hor yimaado noqdo wax kale.
Inkasta oo uu weeraryahanku kulamada Clásico-da qaab ciyaareed fiican hadana kooxdiisa Real Madrid ayaan ahayn koox qaab ciyaareed fiican ku soo hor dhigta kooxda ay xafiiltamaan maadama ay Kooxda Real Madrid guuldaro kala kulantay kooxda Barcelona 13 kulan oo uu ciyaarayay weeraryahanka Benzema halka ay iyaduna badisay kaliya 6 kulan oo uu Benzema ku jiray garoonka halka kulamada kale ay ku dhamaadeen bar-baro.